Injiilka oo ku qoran af-soomaali - Page 5 of 29 - Kani waa boga shabakada internetka ee aad ka fahmi Injiilka iyo dhamaan khayrkii aay ku hadleen nebiyadu.
by rago[email protected]
Su’aashan waxaan si faahfaahsan u baarnay, annagoo adeegsanayna dhagar-madoobaadkii Kacbada (318-kii Hijriyada) laga waayay, si aan arrintan u muujinno. Kuwa inkira in Ciise al-Masix NNKH… Read More »Quraanka & Taariikhda: Ciise al Masix miyuu ku dhintay iskutallaabta?
Injilku wuxuu caddeynayaa in iskutallaabta iyo sarakicidda Ciise ay udub dhexaad u ahayd qorshaha Ilaah. Dhab ahaantii 50 maalmood ka dib sarakicidda Ciise, Peter, oo… Read More »Sidee Tawreeda Muuse wax uga sii sheegay Ciise?
The Taurat nabi Muuse NNKH ayaa soo dajiyay aqoontii hore ee Isa al Masih NNKH iyada oo loo marayo calaamado u ekaa imaatinka nebiga. Nebiyadii raacay Muuse… Read More »Sidee Sabuurrada iyo Nebiyadu wax u sii sheegeen Isa al Masih?